Ander Herrera oo ka hadlay kulanka Axada ee Manchester derby – Gool FM
(Manchester) 09 Nof 2018. Xidiga khadka dhexe ee kooxda Manchester United Ander Herrera ayaa aaminsan in kooxdiisa ay soo bandhigto qaab ciyaareed cajiib ah, marka lala xiriirinayo in xaalad adag ay ku jirto.
Ander Herrera ayaa sidoo kale sheegay in markale awoodooda ay ku muujin doonaan kulanka ay Axada kula ciyaari doonaan Manchester City horyaalka Premier League.
Laacibka reer Spain ayaa yiri: “Marka aad guuleysato waxaad isku dayeeysaa inaad isku diyaariso kulanka xiga, waxaanahay Manchester United, waxaa xaqiiqo ah inaan soo marnay waqtiyo xun”.
“Si aan hormar u sameyno waa inaan qiranaa waqtiyada adag aynu ku gudi jirno”.
“Haa, natiijooyinkii dhawaa waxay sare u qaadeen niyada iyo rajada kooxda, waxaanahay Manchester United waxaan arki doonaa waxa dhaca dhamaadka xili ciyaareedka, hadii aan awoodno inaan ka hadli karno inaan qaadanay xili ciyaareed fiican iyo hadii kale”.
“Waxaan dooneynaa in kulanka Manchester City aan guuleysano, waa musharaxa ugu cad cad, sababtoo ah waxay bixinayaan qaab ciyaareed cajiib ah, balse waxaanahay Manchester United, mana la ogaan karo waxa dhici doona”.
Si kastaba Manchester United oo kaalinta 7-aad fadhida ayaa waxay 9 dhibcood ka hooseysaa hogaamiyaasha horyaalka Premier League ee Manchester City, kadib 11 kulan ilaa iyo haatan laga soo ciyaaray horyaalka dalka England.
"Maalin kasta Ciid ma ahan.". Mourinho oo DIGNIIN u diray xiddigihiisa ka hor kulanka Manchester City